တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ပြောပါရစေ …
မမေဓါ ပြန်ရှင်းပြထားတာလေး ကောင်းတယ်။
10/16/2012 2:08 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာလာပေးသွားတဲ့ အဲဒီကွန်မန့်တွေကို ကျနော်လည်း သတိထားမိခဲ့တယ် မမေ..၊ ကျနော် ခန့်မှန်းကြည့်ရသလောက် အဲဒီကွန်မန့် ပိုင်ရှင်တွေက ‘အမလေး.. ကိုယ်မွေးပြီး တသက်လုံး ကြီးလာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကိုများ အခုမှ လာပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူး ဘာဘူးနဲ့ ဖြစ်နေလိုက်တာ’ ဆိုတဲ့ စိတ်အခြေခံနဲ့ ရေးခဲ့ကြပုံ ပါပဲ၊
မမေ.. ပြန်ရှင်းပြထားတာ အင်မတန် ပြည့်စုံပါတယ်၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကိုယ်သိလာတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်လေးအတွက် အသုံးချ၊ ပြုပြင်၊ ထောက်ပြဖို့ လိုပါတယ်၊ အဲဒါကမှ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချစ်ခြင်းလို့ ကျနော်တို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ့်ရိုးရာကို ဘဝမေ့တဲ့စိတ်နဲ့ ပုတ်ခတ်စော်ကားတာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ရေချိန်ကို မြှင့်တင်ဖို့က ကျနော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်..။
10/16/2012 3:26 PM
နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကိုယ်သိလာတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်လေးအတွက် အသုံးချ၊ ပြုပြင်၊ ထောက်ပြဖို့ လိုပါတယ်၊ အဲဒါကမှ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချစ်ခြင်း။
ကိုယ့်ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ရေချိန်ကို မြှင့်တင်ဖို့က ကျနော်တို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်..။
10/17/2012 2:11 AM
လွတ်လပ်စွာ အမြင်ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် မမမေ စေတနာတွေကို တွေ့ မြင်ရတယ်..မြန်မာပြည်ရဲ့အစားအသောက်၊ သန့် ရှင်းမှု တိုးတက်စေချင်တယ်..အစိုးရပိုင်းကလည်း အစားအသောက် ရှောင်တခင် ဝင်စစ်ဆေးတာတို့ ၊ ဆိုးဆေးတွေကို စစ်ဆေးသင့်တယ်..စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်ပညာပေးနိုင်ဖို့ လဲ လိုတယ်..
10/17/2012 4:00 AM
မမမေ တကယ်တော့ ဒီလို အစားသောက်တွေအန္တရာယ်ရှိကြောင်း ပြောနေကြတာတွေဟာ တိုင်းပြည်မချစ်လို့ ဘဝမေ့လို့ပြောနေကြတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကိုယ့် မိဘဆွေမျိုးသားချင်းများအပါအဝင် လူတိုင်းကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု ရှိစေချင်လို့ဆိုတာ အများစုက သဘောပေါက်ကြမှာပါ.. ပူးတေတို့ဆိုလဲ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် အရင်က လမ်းဘေးအသုတ်ဆိုင်က အသုတ်ကို မက်မက်မောမောစားခဲ့ပေမယ့် အခုကြည့်တော့ စားရမှာ မရဲဘူးဖြစ်နေတာတွေဟာ ဘဝင်မြင့်လို့ ဘဝမေ့လို့ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတာတွေမှ မဟုတ်တာ.... အပြုသဘောနဲ့ မြင်တဲ့လူရှိသလို အပြုသဘောမဆောင်တဲ့ လူတွေလဲရှိနေကြတာ လောက သဘာဝပဲထင်ပါရဲ့မမရယ်... မမပို့စ်ကို ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ အစားမတော်ပ်ို့စ်ကနေဖတ်ပြီးရောက်လာပြီး အဲတုန်းထဲက မန့်ခဲ့မလို့ပါပဲ..... အချိန်မရတာနဲ့ စာအမြန်ဖတ်ပြီး ပြေးရတာနဲ့ မမန့်ခဲ့မိဘူး... မမဆက်ရေးပါ... ကောင်းပါတယ်... ဗဟုသုတရော ပညာရော ရပါတယ်
ပြောပြ ရှင်းပြတဲ့အတွက် ကြီးမေကို ကျေးဇူး အကြီးကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ....
စကားမစပ် ဆူးပုတ်ကို အခြောက်ခံစားရတယ်ဆိုတာ တခါမှ မသိဘူးဗျာ...း))
ညီမ ရှင်းတာလေးတွေကတော်တော်ကောင်းတယ် ...
ကလေးမွေးတာကအစ ကိုယ်ဘာသာ မညှစ်ချင်ဘဲ ခွဲမွေးတာ ဂုဏ်လုပ်ပြီး ခွဲချင်ကြတာတွေ ကို တော်တော် အမြင်ကပ်တယ် ... အကြောင်းတခုခု ရှိလို့ ခွဲမွေးတယ် ဆိုလဲထားပါတယ်.. အခုတော့ ဆရာဝန် တွေက စပြီးမလိုအပ်လည်း အားလုံး သူတို့စီပြရင် ခွဲမွေးပေးတော့တာပဲ.
သြ ဒါနဲ့ ညီမ ပြောတဲ့ ရေညှိစိမ်းတွေ အပြင် ဟိုအစိမ်း တွေပါ လုံးဝပျောက်သွားရင် ပိုပို ချစ်စရာ ကောင်းလာမဲ့ ချစ်သော အမိမြန်မာပြည် ပါ
ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်စေတဲ့ အစားမျိုးတွေကို မသိခင်ကတော့ မသိသလို စားမိပါတယ်
သိပြီးတဲ့အခါမှာတော့ သိသိကြီးနဲ့ ဆက်မစားနိုင်တော့ပါဘူး မစားဖြစ်တော့ပါဘူး..
သိသိကြီးနဲ့ ဆက်စားနေတာမျိုးကျတော့ မိမိကိုယ်ကို ဂရုမစိုက်တာ ။ မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးကို တန်ဖိုးမထားတာ ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဆင်ခြင်ပြီး နေထိုင် စားသောက်တာဟာ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်တာမို့ မှားတဲ့လုပ်ရပ်လို့ မထင်ပါဘူး။မိမိကိုယ်ကို ဂရုမစိုက်ရင် ကိုယ်ဘဲ ခံရတာဘဲ မဟုတ်လား မမေ..
ကိုယ့်နိုင်ငံကို ချစ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေမဲ့ အစားအသောက်မျိုးကျတော့ ချစ်လို့ဆိုပြီး စားလို့မှ မဖြစ်တာဘဲနော်။
10/17/2012 10:38 AM
မယ်ဆိုရင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ပဲကြည့်ပြီးပြောလို့ရ
ပဲ....၊အရှေ့တောင်အာရှမှာ လူတစ်ဦးချင်းဆီရဲ့ မျှော်မှန်း
နိုင်တဲ့ အသက်နှုန်းထားက မြန်မာနိုင်ငံအောက်မှာ ကမ္ဘော
ကျွန်တော်ကတော့ မမေရဲ့ပို့စ်ထဲမှာ စေတနာ ကိုမြင်နေ
10/17/2012 4:05 PM
တခါတလေ လူတွေက အခံနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ အမြင်တွေ စောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အနေကြာတဲ့ မြန်မာက ပြောတော့ ကိုညီလင်းသစ် ပြောသလိုပဲ ဒီအတွေးလေး ‘အမလေး.. ကိုယ်မွေးပြီး တသက်လုံး ကြီးလာခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကိုများ အခုမှ လာပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ဘူး ဘာဘူးနဲ့ ဖြစ်နေလိုက်တာ’ ၀င်သွားစေတယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ သတ္တိမရှိဘူးပဲ ဆိုဆို.. အဲလို အထင်ခံရမှာစိုးလို့ တော်ရုံဆို မပြောရဲပါဘူး။ ကျွန်မ ဆိုလိုချင်တာကမမေတို့အနေနဲ့ စေတနာနဲ့ ရေးပေမဲ့အတိုက်အခိုက်ခံရမှာပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် စိတ်ထဲ မထားပါနဲ့။ နောက်တခု အကြံပေးချင်တာက အခုလို blog မှာရေးတာထက် မြန်မာပြည်က စာစောင်တွေကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကိုတကယ်ဖန်တီးနိုင်မှာက မြန်မာပြည်က လူတွေပါ။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေလဲ ဒီစာစောင်တွေ အပေါ် အတိုင်းအတာတခုတော့ အလေးထားလာပြီလို့ ကျွန်မထင်မိတာပါပဲ။
10/18/2012 3:17 AM
အင့် ဒီပိုစ်ကို ဖတ်ပြီး ဟိုးအရင်တုန်းက ဘုန်းဘုန်းတင်ခဲ့ဖူးတဲ့ပိုစ်ကို ပြန်သတိရသွားပြီ။ ဘာလဲဆိုတော့ ရွာမှာ ရေသန့်မပြောနဲ့ ရေစစ်တောင် မပါဘဲ သောက်သုံးလာခဲ့ကြတာ အဖိုးအဖွားတွေတောင် အသက်တွေ ၈၀-ကျော်သူကကျော်၊ ၉၀-ကျော်သူကကျော်ဆိုပြီး ရေးခဲ့မိတာလေးကို ပြန်အမှတ်ရတယ်။ ကြီးမေပြောသလိုပဲ တစ်သမတ်ထဲ ပြောလို့တော့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ ဟုတ်တာပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့အိမ်က ရေနွေးအိုးလေ တဖြေးဖြေးနဲ့ ထူထူလာတယ်။ ရေမှာပါတဲ့ ထုံးဓာတ်တွေ ထင်ပါတယ်။ အဖြူရောင်ကြီးတွေလေ။ အခုမှ ပြန်တွေးပြီး ရှက်လိုက်တာ။ ဟိ။ ချမ်းမြေ့ပါစေ ကြီးမေရေ
Thank you for your response. What prompted me to write the comment was all about author’s tone of voice. When we talk to each other face to face, we translateaspeaker’s tone of voice through his/her intonation, facial expressions, and body language. Same thing applies to literature which can be translated through the words that the authors use in their story. Those words convey happiness and sorrow, anger and peace, frustration and facilitation, disappointment and pleasure, fear and courage, disgust and respect, love and hatred, and all kinds of human emotions to the readers. Readers who readalot can easily catch the author’s point of view. Your intention to tell the readers about usage of fertilizer in Myanmar was vaguely described in your post. Instead the message I got from your post was the food people are eating in Myanmar is smelly, trashy, unhealthy, and dirty. That was the main reason why I leftaharsh comment under your previous post. I was glad to know that there was someone who felt the same way as I did and left another not-so-nice comment of her own even though hers was not as harsh as mine. When I first read your original post, my jaw dropped because I did not expect to see such kind of writing from someone like you whom I have admired and have been respectful of your artistic work and sharp tongue on Myanmar community blogosphere. There’s no personal, because you do not know me and neither do I. We all love our country and hope for the best of the best. There’s no question asked. Only few of us are lucky enough to leave our country to study and live abroad. Many of our relatives, sisters, brothers, aunts, uncles, friends, and colleagues are still living back in Myanmar and they do not have many choices to make but to eat whatever available to them for their survival. Should we be kind enough to critique food that others are putting into their mouth? I apologize if my comment hurts your feeling.
10/19/2012 3:15 AM
I really agree with the above anonymous comment..that's exactly what I think & what I want to say...
10/29/2012 3:01 PM
မလေးလည်း ဘလောဂ်တွေ ဒီနေ့ တစ်နေကုန်
မမေဆီမှာ ဖတ်စရာအကြွေးတွေ အရမ်းတင်နေတာတွေ့လိုက်တယ်..
11/29/2012 10:48 PM